जसले गाउँमा अस्पताल बनाउन २... :: सुजिता कार्की :: Setopati
जसले गाउँमा अस्पताल बनाउन २ करोड बराबरको जग्गा दान गरे
दाङ तुलसीपुरका एक जना युवाले गाउँमा अस्पताल निर्माण गर्न सहयोग पुगोस् भनेर दुई करोड बराबरको निजी जग्गा दान गरेका छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ अश्वारा निवासी ३० वर्षीय अभिषेक शाहले गाउँमा अस्पताल निर्माण गर्न सहयोग पुगोस् भनेर आफ्नो १३ कठ्ठा जग्गा स्थानीय सरकारको नाममा पास गरिदिएका हुन्।
अष्ट्रेलियामा टुरिजम र हस्पिटालिटीको अध्ययनपछि हाल गृह जिल्ला दाङको अश्वारामा बस्दै आएका उनले गाउँको विकासमा टेवा पुगोस् भनेर आफ्नो निजी जग्गा दान गरेको बताए।
‘म आफ्नो ठाउँको विकास चाहन्छु र यसबाट अरुले पनि प्रेरणा पाउन भन्ने मेरो मान्यता हो,’ शाहले भने। विकास के हो ? भन्ने कुरा त्यो आफूले विदेशमा देखेर आएको हुँदा आफ्नो गाउँको विकास गर्न अस्पताल निर्माण कार्यमा सहजता होस् भन्ने उद्धेश्यले सरकारलाई जग्गा दान गरेको शाहले बताए।
‘अस्पताल निर्माण भएपछि नजिकै गाउँमै सर्वसाधारणले उपचार पाउन भन्ने सोच राखेर मैले जग्गा दान गरेको हुँ,’ शाहले सेतोपाटीसँग भने,‘सम्पत्तिले कसलाई पो पुगेको हुन्छ र ? मैले धेरै भएर जग्गा दान दिएको हैन।आफ्नो गाउँमा अस्पताल बनोस्, विकास होस्, बाटो कालोपत्रे होस भन्ने सोचले जग्गा दिएको हुँ ।’
समाजमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको र कसैले केही गर्न चाहे पनि बढी नकारात्मक कुरा मात्रै हुने गरेको भन्दै शाहले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न ,हातेमालो गर्दै विकासमा जुट्न सबैलाई हौसला मिलोस् भनेर अस्पताल निर्माण गर्न जग्गा दान दिएको बताए।
‘सबैको सहकार्यले,हातेमालो गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सके विकास पनि त्यसैगरी संभव हुन्छ। त्यही सोचले मैले सानो प्रयास गरेको हुँ,’ शाहले भने।
उनले समाजका लागि केही गर्न पाउनु पनि एउटा ठूलो अवसर भएको बताए।
‘समाजमा हातेमालो गर्दै सक्दो सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो परम्परा नै हो। ज्यूँदो छँदाको जन्ति र मर्दाको मलामी त्यसै कहाँ भनिएको हो र’ शाहले भने।
कुनैदिन आफैँ पनि अकस्मात बिरामी भइएला। रातिमा अस्पताल जान कोही व्यक्तिलाई सवारी साधन नहोला। त्यस्तोमा गाउँमै अस्पताल भए सबैलाई सुविधा हुने उनले बताए।
तुलसीपुर बजारदेखि झन्डै साढे ३ किलोमिटर पश्चिममा अश्वारा गाउँ रहेता पनि त्यो हालसम्म ‘बत्ति मुनीको अध्याँरो’ जस्तै छ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष बेदु केसीको आग्रहमा आफूले अस्पताल निर्माण गर्नका लागि उक्त जग्गा उपमहानगरको नाममा पास गरिदिएको शाहले बताए। आफूले दिएको जग्गामा भनिए अनुरुप जग्गाको सदुपयोग गरेर अस्पताल निर्माण गर्न उपमहानगरपालिकाले इमान्दारिता देखाओस् भन्ने चाहाना रहेको शाहले व्यक्त गरे।
शाहले उपलब्ध गराएको जग्गामा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माण गर्न वैशाख १ गते नयाँ वर्षको दिन शिलान्यासको तयारी गरिएको वडा अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले उक्त जग्गामा ‘भिमसेन सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र’ निर्माण गर्ने निर्णय पारित गरिसकेको र वैशाख १ गते नै शिलान्यास गर्ने निर्णय पारित गरेको बताए।
शाहले जग्गा दान बुवा भिमसेन शाहको नाममा गरेको हुँदा त्यही नाममा प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय भएको वडा अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए।
प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माणको लागि ९२ लाख बजेट छुट्याइ सकिएको केसीले बताए। नयाँ वर्षको एक गतेदेखि नै प्रवर्द्धन केन्द्रको सेवा भने वडा कार्यालयबाट सुरू गरिसक्ने उनले बताए।
‘शिलान्यास भएकै दिन चिकित्सक लगायत आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी आएर वडा कार्यालयबाट सुरूमा सेवा प्रवाह हुनेछ,’ वडा अध्यक्ष केसीले भने।
६ महिनाभित्रै अस्पताल भवन निर्माण कार्य पुरा गर्ने उद्धेश्य लिइएको उनले बताए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २७, २०७४, ०४:३७:४८